यात्रुको ज्यान जोगाउन खोज्दा आफ्नै ज्यान गुमाउने यी चालक को हुन् ? « Sajha Page
यात्रुको ज्यान जोगाउन खोज्दा आफ्नै ज्यान गुमाउने यी चालक को हुन् ?
धरान, २६ चैत्र । सोमबार मध्याह्न धरान १३, जिरोपोइन्टमा भयानक दुर्घटनामा यात्रुलाई बचाउन खोज्दा चालक आँफैले ज्यान गुमाएका छन् ।
प्राय अन्य दुर्घटनामा चालकलाई दोष दिएको पाइएको भए पनि हिजो धरानमा भएको दुर्घटनामा भने प्रहरीदेखि घाइते यात्रु सबैले चालकको दोष नभएको बताएका हुन् ।
धरान जिरोपोइन्टमा भएको उक्त भयानक दुर्घटनामा चालक र एक पाँच महिने बच्चीसहित ४ जनाको ज्यान गएको छ ।
को हुन् त ती असल चालक ?